RASMI: Difaaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk oo abaal-marin kale ku guuleystay… + SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Difaaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk oo abaal-marin kale ku guuleystay… + SAWIRRO
Haaruun May 12, 2019
(Liverpool) 12 Maajo 2019. Difaaca kooxda kubadda cagta Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2018-19 ee Premier League Player of the Season.
Van Dijk ayaa kaliya seegay 35 daqiiqo inuu u ciyaaro Reds 37 kulan oo ay ciyaartay ka hor kulankeeda galabta oo Axad ah ay horyaalka ku soo gabagabayn doonto, waxaana uu ka caawiyey kooxdiisa Liverpool inay shabaqeeda gool ka ilaashato 20 kulan, isagoo u dhaliyey afar gool.
Laacibkan lambarka 4-aad u xirta kooxda Liverpool ee Van Dijk ayaa horay ugu guuleystay abaal-marinta laacibka sanadka ee PFA Players’ Player of the Year bishii la soo dhaafay.
Van Dijk waxa uu abaal-marinta xilli ciyaareedka ee Premier League ku garaacay xiddigaha ay isku kooxda yihiin ee Sadio Mane iyo Mohamed Salah, saddexda ciyaryahan ee kooxda Manchester City Sergio Aguero, Bernardo Silva & Raheem Sterling iyo Eden Hazard oo ka tirsan Chelsea, kuwaasoo dhammaantood kula tartamayey.
Xiddiga ku guuleysta abaal-marintan waxaa lagu go’aaminayaa codka laga uruuriyo taageerayaasha, codadka ay bixiyaan kabtannada 20-ka kooxood ee Premier League iyo codadka ay dhiibtaan qubaro ku xeel dheer kubadda cagta.
Van Dijk ayaa abaal-marintan dib ugu soo celiyey garoonka Anfield, kaddib markii Mohamed Salah uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedka horyaalka Premier League sanadkii hore ee 2018.
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay Liiska xidigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Real Sociedad